Ku dhawaad 40 Qof Oo Ku Dhintay Shil Ka Dhacay Galbeedka Dalka Kenya.
Sunday December 31, 2017 - 20:33:31 in Wararka by Super Admin
Tobanaan qof ayaa ku dhintay shil baabuur oo markale ka dhacay gudaha wadanka Kenya xilli tirakoob cusub oo la sameeyay uu muujinayo in ku dhawaad 3500 oo qof ay sanaddii lasoo dhaafay udhinteen shilal gaari.
Saraakiisha Booliska Kenya waxay sheegeen in 36 ay ku dhinteen shil baabuur oo ka dhacay deegaan dhaca duleedka magaalada caasimadda ah ee Nairobi halka dhaawacyada 20 qof loola cararay isbitaallada.
Shilka labadan gawaari ayaa ka dhacay arroornimadii hore ee Axadii maanta waddo weyn oo ku taalla galbeedka Kenya oo isku xirta magaalooyinka Eldoret iyo Nakuru.
Wariyaall ayaa soo sheegay in Waddooyinka kenya ay inta badan khatartu ku badan tahay xiliyadaan oo kale oo ah dhammaadka sanad walba maadaama inta badan dadku ay u safraan gobolada dalka taasi oo keenta in darawalada gawaarida ay si xowli ah u kaxeeyaan gaadiidka, dadka gaadiidka sida xad dhaaf ah u raacaya ayaa tiigsanaya magaalooyinka si ay uga qeyb galaan dabaal degyada loo dhigayo sanadda cusub.
Dhinaca kale guddi qaabilsan dabalgalka socdaalka waddooyinka Kenya ayaa sheegay in sanadda 2017 ay dhaceen shilal aad ufarabadan oo gallaaftay nolosha in kabadan 3500 oo qof taas oo ka dhigan in sanadkan uu yahay midkii ugu khasaaraha badnaa ee Kenya soo mara.